I-Android: Ungayitshintsha njani okanye uyongeze njani indlela yokuhlawula yogcino kuGoogle
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android: Ungayitshintsha njani okanye uyongeze iindlela zokuhlawula zeGoogle Play Store
I-Android: Ungayitshintsha njani okanye uyongeze iindlela zokuhlawula zeGoogle Play Store
Nceda uqaphele: esi sisifundo sabasebenzisi abangenamava.
Ukuba unesixhobo se-Android esinokufikelela kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, mhlawumbi sele unethuba lokuthenga into kwivenkile. Kodwa ngamanye amaxesha awufuni ukusebenzisa indlela yokuhlawula oyimisileyo ekuqaleni, okanye ufuna ukuyibuyisela iyonke. Ngethamsanqa, ukutshintsha nokulawula iindlela zakho zokuhlawula kuGoogle kulula.
Ukutshintsha useto lwentlawulo, kuya kufuneka uqale uvule iVenkile yokuDlala kwiFowuni yakho ye-Android. Nje ukuba usetyenziso luvuleke, kuya kufuneka ucofe iqhosha lemenyu elibonwe kwikona ephezulu ngasekhohlo (unokufikelela kwimenyu ngokuswayipha umnwe wakho ukusuka kwicala lasekhohlo lesikrini sakho uye kwiziko) Ukusuka kwimenyu ehlayo ebonisa phezulu, kuya kufuneka ukhethe i-akhawunti yam. Emva koko uya kukwazi ukubona indlela yokuhlawula (okanye iindlela) osele uyisebenzisa, kwaye ungabona iqhosha elikuvumela ukuba ungeze iindlela ezintsha zokuhlawula. Ukucofa kweli qhosha kuyakubonisa ukhetho onalo, kubandakanya ukongeza ikhadi lekhredithi okanye ledebhithi, okanye uvumele ukubizwa kwemali.
Apha ngezantsi kweqhosha elithi 'Yongeza indlela yokuhlawula', uya kuqaphela iqhosha lokuseta ngakumbi. Xa ucofa kuloo nto, uya kucelwa ukuba uphinde ufake ipassword yakho kuGoogle ukuze ungene kwiakhawunti yakho yeWallet. Emva kokuba ungene, uza kubona ikhadi lakho letyala elisisiseko (onokuluhlela okanye ulisuse), kwaye unakho ukongeza amanye amakhadi.
Ewe ungazenza zonke ezi zinto kwi-PC, emva kokuba ungene kuGoogle Play nakwesiphi na isikhangeli.
Ulawula njani useto lokuhlawula lweGoogle Play Store
iwotshi yeapile ayinamanzi
Imifanekiso ye-AT & T ye-Motorola Razr 5G ebonisa ukuba iya kugcina inqaku lomhla omncinci
I-5 ekumgangatho ophezulu wokurekhoda ii -apps ze-Android
Iindleko ze-iPhone SE ezihlaziyiweyo zeenxalenye zizisa inzuzo enkulu kwiApple
Ukuqinisekiswa kwe-OAuth 2.0 ngokuGatling usebenzisa iTywina yeBhere
I-Galaxy Z Fold 3 kunye neFlip 3 zokucacisa ukuvuza: ikhamera engaphantsi komboniso, uS Pen, iglasi yokugubungela iCorning
Intengiso yeBuyBuy kunye neWalmart emnyama yangoLwesihlanu evuzayo- $ 250 yamakhadi esipho nge-Galaxy S7 okanye nge-S7
Ungayikhulula njani ngokuhambisa ii -apps kwimemori khadi ye-MicroSD kumda wakho we-S7 okanye i-S7